Ọktoba. Nhọrọ nke akụkọ nchịkọta akụkọ | Akwụkwọ ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 01/10/2021 12:00 | Emelitere ka 28/09/2021 18:01 | Egwuregwu, Ndị edemede, Akwụkwọ, Novela, Black akwụkwọ, Akwụkwọ akụkọ ịhụnanya
October na -abịa na ọtụtụ ma dị mma akwụkwọ edemede ihu mgbụsị akwụkwọ n'ụzọ kacha mma. Ma ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume ịnakọta ha niile, nke a bụ nhọrọ m nke aha 6. Akwụkwọ akụkọ oji, ọchị, akwụkwọ ọgụgụ akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ akụkọ nwata na-eleghara mmemme ekeresimesi na-adịghị anya.
1 Ihe nzuzo onye na -agba ụta - Sarah Penner
2 Ọnwụ na Nọvemba - Guillermo Galván
3 Ezi ekeresimesi - JK Rowling
5 Theodora, Chrysalis nke Byzantium - Jesús Maeso de la Torre
6 Blacksad 6 - Ihe niile dara (akụkụ nke mbụ) - Juan Díaz Canales na Juanjo Guarnido
Ihe nzuzo nke onye na -agwọ ọrịa - Sarah Penner
6 maka October
Sarah Penner bụ onye edemede America onye mpụta mbụ ya n'afọ a n'akwụkwọ akụkọ enweghị ike ịka nke ọma. Ugbu a, anyị abịala ebe a aha izizi a tụgharịrịla n'asụsụ karịrị iri anọ ma ahazila maka mmegharị telivishọn.
Na mbụ anyị na -aga London narị afọ nke XNUMX, ebe enwere ụlọ ahịa ọgwụ zoro ezo nke na -ebu Nella, nwanyị dị omimi, nke a na -akọ na ọ na -enye nsị n'ụdị ọgwụ nye ndị ọ dị mkpa iji ya megide ụmụ nwoke na -emegbu ha. Mana mgbe onye na-akwado ya, nwata nwanyị dị afọ 12, mehiere ihe na-egbu egbu, a ga-emebi ọdịnihu ya site na nsonaazụ ga-adịru ọtụtụ narị afọ.
Na ugbu, onye ọkọ akụkọ ihe mere eme na -achọsi ike aha ya bụ Caroline na -ekwu okwu ọ na -eme ememme ncheta agbamakwụkwọ nke iri ya naanị. Mana ọ ga -ahụ ntụzịaka iji dozie ogbugbu na -akpali mmasị nke mere na London ihe karịrị narị afọ abụọ gara aga. Na akara aka nke Caroline na Nella ga -abanye na mbara igwe nzuzo, ịbọ ọbọ na ụzọ ha abụọ nwere ike isi zọpụta ibe ha, n'agbanyeghị oge mgbochi.
Ọnwụ na Nọvemba - Guillermo Galvan
13 maka October
Mgbe Mowing oge y Nwa agbọghọ nke Ọkpụkpụ, Alaghachi Carlos Lombardi, Yabụ ndị anyị bụ ndị uwe ojii Madrid meriri mgbe agha a mechara Guillermo Galvan anyị nọ na chi.
Ugbu a ọ na -ewetara anyị Nọvemba 1942, na Agha Ụwa nke Abụọ n'azụ na Spain, na mmegbu zuru oke, nke juputara na ya ndị nledo. Lombardi abatala Madrid ma lanarị ka ị nwere ike were gị onye nyocha. Yabụ na ịnweghị ike ịjụ ọrụ ọ bụla, ị ga -enyocha ma soro onye na -ere ahịa na -ejegharị ejegharị nke German dị omimi.
N'otu oge ahụ na -achọsi ike Onye na -eme ihe nkiri a na -enyo enyo pụtara igbu ya ndị uwe ojii enwechaghị mmasị n'ịchọpụta ihe kpatara ya. A ga -ejidekwa Lombardi n'okwu ya, ebe enweghị nnukwu atụmatụ ịgba akwụna, sinima na ahịa ojii.
Ezi ekeresimesi - JK Rowling
Rowling laghachiri children'smụaka ụwa na akụkọ ekeresimesi mbụ a nke ezubere ka ọ bụrụ maka ezinụlọ dum, ọ bụghị naanị maka ụmụaka.
Onye bu uzo bu Mkpịsị aka, ihe egwuregwu ụmụaka kacha amasị Jack, nke na -efu n'ụbọchị Ka chifoo. Mana ebe ọ bụ abalị ọrụ ebube pụrụ iche, ihe egwuregwu ụmụaka na -adị ndụ. Na nke enyerela Jack, ezi ezi ekeresimesi ọhụrụ (onye ga -anọchi Dito), ga -amalite atụmatụ dị oke egwu: nke njem anwansi iji nwaa ịgbake ma chekwaa onye bụbu ezigbo enyi Jack.
14 maka October
Mgbe trilogy Las Cenizas de Hispania na Aha Chineke, na-abịa n'azụ Jose Zoilo ya na akwụkwọ akụkọ ugbu a na Vikings.
Anyị nọ na narị afọ nke XNUMX na Hrolf ragnallson ahapụla ya Norway nwa afọ ka ya na ezinụlọ ya biri na Erin dị anya, ebe ọ ga -abụ nwoke. Ọzọkwa, dị ka onye mbụ, ọ ga-ahụ maka ịchịkwa ugo nke oke ifufe ma duru ndị ikom ya gaa n'ụsọ mmiri ndị ọzọ ka ha nweta akụnụba na ama. Ha ga -atụkwasịkwa anya ha Al Andalus. Tupu ha abịarute n'ikpere mmiri nke Gallecia n'ebum n'uche ịkwakọrọ ihe ha hụrụ n'ụzọ ha n'enweghị nsogbu. Ma ha amaghị nke ahụ Ramiro, eze Asturian, ekpebiela ịlụ ọgụ. E meriri ndị agha Viking na E jidere Hrolf site na otu ndị Asturians. Ọ na -abụ ohu a na -akpọ ya "Lordemano", yabụ na ọ ga -eme ihe ọ nwere ike ime ka ọ dịrị ndụ.
Theodora, Chrysalis nke Byzantium - Jesus Maeso de la Torre
20 maka October
Aha ọzọ dị ukwuu n'akwụkwọ akụkọ ihe mere eme bụ nke Jizọs Maeso de la Torre, nke na -ebido ọrụ ọhụrụ a. Oge a ọ na -ewega anyị na Constantinople na 548, ebe Nwanyị Eze Nwanyị Theodora, nwunye Eze Ukwu Justinian, ka nwụchara na nnukwu nsogbu nke ndị ya. Na onye kacha eru uju ya bụ Nasica el Hispano, ọnaozi kacha ike n'ụlọ ikpe.
Ọ sonyeere ya n'oge ndụ ya niile ọ ga -ekpebi ide akụkọ akụkọ Teodora, nwanyị nwere ọgụgụ isi, aghụghọ na nnukwu obi, mana ọ na -esikwa ike ma nwee ume mgbe ọ kwesịrị ịdị.
Blacksad 6 - Ihe niile dara (Nkebi nke mbụ) - Juan Diaz Canales y Juanjo Guarnido nwere ebe obibi
28 maka October
Ọ bụ ihe ọchị nke afọ, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ọkachasị maka ihe karịrị ọtụtụ ndị na -eso ụzọ - n'etiti ndị m ji onwe m were nraranye gụọ ya - nke a pusi anthropomorphic site na 50s akpọrọ John nwachukwu. Nke gị nke isii, Ihe niile dara, nke bụ akụkụ mbụ nke akụkọ ọhụrụ a. Bụrụ Afọ 8 na-eche na ndị ọzọ ka a na -ebu amụma maka akụkụ nke abụọ. Mana ọ bụ otu a ka imepụta ụdị ọba a si arụ ọrụ, yana lekọta ya nke ọma dịka saga a nke onye na-ese ihe nkiri na onye na-ede ihe onyonyo Juanjo Guarnido na Juan Díaz-Canales mepụtara.
Oge a anyị nwere Blacksad New York, ebe ọ ga -abanye n'ime ala ala ya na oke ndọrọndọrọ ọchịchị na ego na akụkọ ọzọ nke m kwenyesiri ike na ọ ga -ama anyị nke nta ma mee ka anyị dị mkpụmkpụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Ọktoba. Nhọrọ nke akụkọ akụkọ